रेखाको प्रश्न सरकारलाई, न्यायका लागि पनि आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने ? – Pahilo Page
रेखाको प्रश्न सरकारलाई, न्यायका लागि पनि आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने ?
२० आश्विन २०७५, शनिबार १७:३५ 704 पटक हेरिएको
काठमाडौं, २० असोज । नायिका रेखा थापाले सरकारले सिधा भाषा नबुझेको भन्दै न्यायका लागि कस्तो भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने हो ? भन्दै प्रश्न गरेकी छन् । माइतीघर मण्डलामा आयोजित “निर्मला पन्तका लागि जनताको भेला”मा बोल्दै नायिका थापाले त्यस्तो प्रश्न गरेकी हुन् ।
नायिका थापाले भनिन्, “अपराधीलाई कारवाही गर भनेर प्रष्ट भाषामा गरिएको माग सरकारले बुझेन । सरकारले कस्तो भाषा खोजेको हो ? अब न्यायका लागि कस्तो भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने हो ?” उनले बलात्कारका घटनााका अपराधी लुकाएर सरकारले के गर्न खोज्दैछ भनेर पनि प्रश्न गरिन् ।
देशमा पछिल्लो समय महिला हिंसाका घटनामा बृद्धि भइरहेको बताउँदै उनले आगामी दिनमा महिलाको भविष्यबारे आफूहरु त्रसित रहेको बताइन् । न्याय माग्नका लागि समेत विरोध र आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्था आउनु अत्यन्त दुःखद रहेको उनको भनाई थियो ।